Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Saint Vincent sy ny Grenadines vaovao momba ny dia » Ny nosy St. Vincent any Karaiba dia nafindra toerana taorian'ny fipoahan'ny volkano
Niala i St. Vincent taorian'ny fipoahan'ny volkano
St. Lucia sy Grenada, ary koa Barbados sy Antigua dia nanaiky ny handray mpitsoa-ponenana avy any St.Vincent
Ny volkano La Soufrière dia niaina “fipoahana baomba”
Nanafatra ny famoahana tsy maintsy atao ny mponina eny akaiky eny
Andry Ash sahabo ho 20,000 XNUMX metatra ny atsinanana mankany amin'ny Ranomasimbe Atlantika
Ny volkano La Soufrière any amin'ny nosy atsinanan'i Karaiba St. Vincent nipoaka vao maraina androany, ora maromaro taorian'ny fampitomboana ny hetsika tao an-tendrombohitra dia niainga fanesorana tsy maintsy nataon'ny mponina teo akaiky teo.
Ny zoma maraina dia nanambara tao amin'ny bitsika iray ny Fikambanam-pirenena misahana ny vonjy taitra nasionaly St.Vincent, na NEMO fa ilay volkano, fantatra amin'ny anarana hoe La Soufrière, dia niaina “fipoahana mipoaka”, miaraka amin'ny tsangambaton'ny lavenona sahabo ho 20,000 XNUMX metatra ny haavony atsinanana mankamin'ny Oseana Atlantika .
Ny oram-baratra mavesatra ihany koa dia notaterina tany amin'ireo vondron'olona manodidina ilay volkano.
Tsy nisy kosa ny tatitra momba ny maty na naratra.
St. Vincent sy ny Grenadines dia mponina 110,000. Raha ny ankamaroany dia miaina amin'ny nosy lehibe, manodidina ny renivohitry Kingstown, ny isan'ny mponina dia miparitaka amin'ny nosy roapolo.
Nesorina ireo mponina avy tany avaratra atsinanana sy avaratra andrefan'ny nosy izay nandaitra avy hatrany, hoy ny nambaran'ny praiminisitra St.Vincent sy ny praiminisitra Grenadines Ralph Gonsalves.
Nentina tao amin'ny sambo mpitsangatsangana Royal Caribbean izay handeha ho any amin'ny nosy ny olona, ​​hoy ny NEMO, ary nanampy fa mandrindra ny ezaka fanesorana amin'ny tanety ihany koa.
Tamin'ny fanambarana niaraha-niasa omaly, nilaza ny Royal Caribbean sy ny Celebrity Cruises fa “mandefa sambo any St.Vincent any Karaiba hamindra toerana ireo mponina.”
Ireo nosy akaikin'i St. Lucia sy Grenada, ary koa Barbados sy Antigua dia nanaiky ny handray mpitsoa-ponenana avy any St.Vincent.
Tanàn-dehibe dia dingana manaraka ho an'ny valan'aretina fizahan-tany an-tanàn-dehibe